လူသတ်မှု – Page2– Eleven Media Group
Posted on August 9, 2018 August 10, 2018 by ပြည့်ဖြိုးအောင်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်​တွင်​ အ​ကြွေး ကျပ်သိန်း ၃၀ တောင်းရာမှ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့် ကျောင်းဆရာမနှင့် ၎င်း၏မွေးစားသမီးတို့အား ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၃၀ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ သိရသည်။
ကျောင်း​ဆရာမ ဒေါ်​အေး​အေး​မော်​ (ခ) အင်​ကြင်းခိုင်​ (၄၆ နှစ်) နှင့်​ မွေးစားသမီး မ​ကျော့​ကေခိုင်​ (ခ) ​ကျော့ဆုပန်​ (ခ) ချစ်​ပု (၂၆ နှစ်) တို့အား ရာဇသတ်​ကြီး ဥပ​ဒေပုဒ်​မ ၃၀၂ (၂) အရ အလုပ်​နှင့်​​ ထောင်​ဒဏ်​ နှစ် ၂၀၊ ရာဇသတ်​ကြီးဥပ​ဒေပုဒ်​မ ၃၉၂ အရ အလုပ်​နှင့်​​ ထောင်ဒဏ်​ ၁၀ နှစ်​ ယင်းပြစ်​ဒဏ်​နှစ်​ရပ်​ကို သီးခြားစီကျခံ​စေရန်​ အမိန့်​ချမှတ်​ခဲ့ပြီး ဒေါ်အေးအေးမော်၏သမက် ညီညီလင်းအား ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၄ အရ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအမှုဖြစ်​စဉ်​မှာ၂၀၁၆ ခုနှစ်​ ဇွန်​ ၂၀ ရက်က သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် စံပြရပ်ကွက် ၅ လမ်းရှိ ပထမထပ်​​တိုက်အိမ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရဲတပ်​ဖွဲ့က စုံစမ်းရာ သေဆုံးသူ ဒေါ်…. မှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ခန့်မှစ၍ ကျောင်းဆရာမ ဒေါ်အေးအေးမော်ဆိုသူနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း သိရသဖြင့် ဒေါ်အေးအေးမော်၏ လိပ်စာအား အဖွဲ့များခွဲ၍ စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ ကျောင်းဆရာမမှာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ကြီးပွားရေးရပ်ကွက် အနော်ရထာလမ်းတွင် နေထိုင်ကြောင်း သိရှိရ၍ သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ မတွေ့ရှိဘဲ တစ်လမ်းတည်းနေ ၎င်း၏မွေးစားသမီး၏ နေအိမ်တွင် သွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ သမီး မကျော့ကေခိုင် (ခ) ချစ်ပုနှင့် သမက်ညီညီလင်းတို့ကိုသာ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး မကျော့ကေခိုင် (ခ) ၏ လက်ချောင်းများတွင် ဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် ဒေါ်အေးအေးမော် သွားလာတတ်ရာနေရာများအား မေးမြန်းရာ စိန်တောင်ကြီးဟိုတယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် တည်းခိုနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့သုံးဦးအား စစ်ဆေးရာ ဇွန်​ ၂၀ ရက်​​တွင် အသတ်ခံရသူထံမှ အကြွေးတောင်းမည်ဟု ထွက်လာခဲ့ရာ သမက်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ကျန်နေခဲ့ကြောင်း၊ တိုက်ခန်းပေါ်သို့ အရောက်တွင် ရရန်ရှိသော ကျပ်သိန်း ၃၀ တောင်းခံရာမှ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စကားများကြပြီး ဒေါ်အေးအေးမော်က စတင်ရိုက်နှက်ရာ ဒေါ်…. က ဖုန်းအားသွင်းကြိုးဖြင့် လည်ပင်းအား ရစ်ပတ်ဆွဲသဖြင့် မကျော့ကေခိုင် (ခ) ချစ်ပုက ၀င်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်….က ဓားမဖြင့်ခုတ်ရာ မကျော့ကေခိုင်၏ ယာဘက်လက်ချောင်းတွင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ဒေါ်အေးအေးမော်က ဒေါ်…. အား ရေချိုးခန်းအတွင်းသို့ တွန်းလှဲကာ လည်ပင်းနှင့် ပါးများကို ဓားမဖြင့် ထိုးခုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် သမီးအား အိပ်ခန်းအတွင်းမှ ခေါင်းအုံးယူခိုင်းကာ ဒေါ်…. ၏မျက်နှာအား ဖိထားပြီး ဒေါ်…. ၀တ်ဆင်ထားသော ဆွဲကြိုးနှင့် လက်ကောက်သုံးကွင်းအား ဖြုတ်ယူခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ထို့နောက် ဆွဲကြိုးနှင့် လက်ကောက်တို့အား ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် (၂၄) ရပ်ကွက် စည်ပင်လမ်း အပေါင်ဆိုင်နှင့် ငွေချေးလုပ်ငန်းတွင် မကျော့ကေခိုင်၊ သမက် ညီညီလင်းတို့နှင့်အတူ ကျပ် ၂၁ သိန်းဖြင့် ပေါင်နှံခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်​တွင်​ အ​ကြွေး ကျပ်သိန်း ၃၀ တောင်းရာမှ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့် ကျောင်းဆရာမနှင့် ၎င်း၏မွေးစားသမီးတို့အား ​ထောင်​ဒဏ်​အနှစ်​ ၃၀ ​အမိန့်​ချ
လှိုင်မြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်တိုးတရားခံနှစ်ဦး ထပ်ထည့်ပေးရန် လျှောက်ထားမှုကို တရားရုံးက ပလပ် (ပယ်ချ) လိုက်သဖြင့် အထက်တိုင်းတရား လွှတ်တော်သို့ ဆက်လက် လျှောက်ထားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ် ၇ ရက်တွင် သေဆုံးသွားသူများ၏ မိသားစုဝင်ထံမှ သိရသည်။
အမှုတွင် နောက်တိုးတရားခံနှစ်ဦး ထပ်ထည့်ပေးရန် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးသို့ ဇူလိုင် ၂၄ ရက်က လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တိုးတရားခံအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခံရသူနှစ်ဦးမှာ သေဆုံးသူ ဒေါ်ကေသီလှိုင်၏ ကျောင်းတက်နေသည့် သမီးကြီးကို ကျောင်းမှ သွားရောက် ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ပယ်ချလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ပယ်လဲလို့ပြောလဲဆိုတော့ ဒီအမှုကို သက်သေ ၁၉ ယောက် စစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ ဒီသက်သေ ၁၉ ယောက်ရဲ့ ထွက်ချက်တွေထဲမှာ ပူးပေါင်းကြံစည်တယ် ဆိုတဲ့ဟာ မပေါ်ပေါက်ဘူးပေါ့။ မထင်ရှားဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီလူတွေကို နောက်တိုးတရားခံအဖြစ် ထည့်တဲ့ဟာကို ပယ်ချတယ်ပေါ့၊ အစ်ကိုကတော့ အထက်ထိတက်မှာပဲ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်ဆီတော့ နည်းမှန်လမ်းမှန် ပေါ်လာမှာပဲလေ” ဟု သေဆုံးသူများ၏ မိသားစုဝင် ကိုလှမျိုးထွန်းက ပြောကြားသည်။
အမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှုခင်းဖြစ်ပြီး ရှစ်လအကြာတွင် နောက်ဆုံးတရားလိုပြ သက်သေအဖြစ် အမှုစစ် ရဲအရာရှိဖြစ်သူ လှိုင်မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲမှူးသိန်းဆွေမြင့်ကို ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ၁၀ ရက်က အနောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံး၊ ရုံးခန်းအမှတ်(၅)၊ တွဲဖက်ခရိုင် တရားသူကြီး(၄) ဦးညီညီအေး၏ တရားခွင်တွင် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“သက်သေ ၁၉ ယောက် ဆိုတာကလည်း ရဲထည့်ထားတဲ့ ဟာတွေဆိုတော့ တိတိကျကျ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရဘူး။ ပြီးတော့လည်း မျက်မြင်သက်သေရှိမှ ကိုယ်တိုင်သိမှသာ အဲဒီလူကို ရုံးတင်လို့ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်တော့မှာတုံး။ မျက်မြင်သက်သေရှိမှ ကိုယ်တိုင်သိမှသာ အဲဒီလူကို ရုံးတင်လို့ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် ဖြစ်တော့မှာတုံး လူသတ်မှုတို့ မုဒိမ်းမှုတို့ဆိုတာ မျက်မြင်သက်သေရှိမှ မရှိတာ။ သတ်တဲ့သူ ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံထားပြီးပြီ ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်ကသူ့ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကို စစ်ရမှာလေ။ ဒီလူပြောတာ မှန်မမှန် ဆိုတာကို။ အခုဟာက အခု အဲဒီထွက်ချက်အတိုင်းပဲ စွဲချက်တင်တော့မှာ။ နောက်တစ်ခုက သေဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့အမှု ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအမှုမျိုးကို နောက်တိုးတရားခံထည့်ဖို့ ရုံးကနေပြီး တော်တော်စဉ်းစား ယူရတယ်ပေါ့၊ အဲဒီလိုပြောတယ်” ဟု ကိုလှမျိုးထွန်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ မှုခင်းဖြစ်စဉ်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် ညပိုင်းတွင် လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်အခန်းတစ်ခန်း၏ အပြင်ဘက်မှအခန်း တံခါးများမှာ သော့ပိတ်ထားပြီး လှေကားထိပ်တွင် အပုပ်နံ့များ ထွက်နေကာ အ၀ါရောင် အရည်များ ကျဆင်းနေကြောင်း အဆိုပါတိုက်တွင် နေထိုင်သူများက သက်ဆိုင်ရာသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာမှတစ်ဆင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်အမှု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုမှ မအေးမာဦး (၂၅ နှစ်)နှင့်၊ မကေသီလှိုင် (၄၀ နှစ်)နှင့် ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ မသာယာထွန်း ကိုးနှစ်တို့ သုံးဦးကို လစာတိုးတောင်းရာမှတစ်ဆင့် စကားများကာ ဇွဲလင်းထက်က ၎င်းသတ်ခဲ့သည်ဟု ၀န်ခံထားပြီး ဇွဲလင်းထက်၏ မိန်းမဖြစ်သူ ခင်ခင်ဖြိုး(၂၁ နှစ်)မှာ လူသတ်မှုမှ ရရှိခဲ့သည့် သက်သေခံပစ္စည်းများ ဖျောက်ဖျက်ရာတွင် အတူတူပါဝင်ခဲ့မှု၊ လက်ဝတ်လက်စား ပစ္စည်းများ ရောင်းချရာတွင် ဇွဲလင်းထက်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ရီတင်(၅၃ နှစ်) က ပါဝင်ခဲ့မှုတို့ဖြင့် ၎င်းတို့သုံးဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဇွဲလင်းထက်၊ ခင်ခင်ဖြိုး၊ ဒေါ်ရီတင်တို့ကို ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂/၃၉၄/၂၀၁/၄၁၄ တို့ဖြင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ရန်ကုန်, လူသတ်မှု, သုံးလောင်းပြိုင်LeaveaComment on လှိုင်မြို့နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော သုံးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်တိုးတရားခံနှစ်ဦး ထပ်ထည့်ပေးရန် လျှောက်ထားမှု တရားရုံးက ပလပ်သဖြင့် အထက်ရုံးအထိ ဆက်တက်မည်ဟု မိသားစုဝင် ပြောကြား
Posted in NewsTagged လူသတ်မှု, အောင်ရဲထွေးLeaveaComment on အောင်ရဲထွေးအမှု အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စတင် ကိုင်တွယ်နေပြီဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အချိန်တန်လျှင် ထုတ်ပြန်မည်ဟု ဆို
ဘိုကလေးမြို့နယ် သဘော့ကျွန်းကျေးရွာတွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား အသတ်ခံရလျက် ပြန်လည်တွေ့ရှိ
Posted on July 4, 2018 July 5, 2018 by မင်းသူဝင်းထွဋ်
ဘိုကလေးမြို့နယ် ညီနောင်ဝကျေးရွာအုပ်စု သဘော့ကျွန်းကျေးရွာတွင် ဇူလိုင် ၂ ရက်က နေအိမ်မှ ရွာအတွင်းသို့ ဈေးဝယ်ရန် ထွက်သွားပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဇူလိုင် ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာလမ်းမနံဘေး၌ အသတ်ခံထားရလျက် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၂ ရက် ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် သဘော့ကျွန်းကျေးရွာနေ ဦးအေးနိုင်ထွန်း (ခ) ကြင်ဝှက် (အဖ) ဦးမြင့်နိုင် အသက် ၃၂ နှစ်မှာ ဘဘော့ကျွန်းကျေးရွာရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်သို့ အလုပ်မှပြန်လာခဲ့ကြောင်း၊ ည ၇ နာရီတွင် ဦးအေးနိုင်ထွန်းမှာ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းမြ (အဖ) ဦးတင်မောင်အား ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဒေါ်ခင်သောင်း၏ နေအိမ်တွင် ၀က်သားသွားဝယ်မည်ဟုဆိုကာ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ဦးအေးနိုင်ထွန်းမှာ အဆိုပါညတွင် နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ဇူလိုင် ၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်မှ ဦးအေးနိုင်ထွန်းအား ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဦးမြင့်ဝေနှင့် ဦးဝင်းလှိုင်တို့ နေအိမ်နှစ်အိမ်ကြား လမ်းမနံဘေးတွင် ၀ဲမျက်ခုံး နှစ်လက်မခန့် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ တစ်ချက်၊ ၀ဲချိုစောင်း တစ်လက်မခန့် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ သုံးချက်ရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသောကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းမြက ဘိုကလေးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြား တိုင်တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on ဘိုကလေးမြို့နယ် သဘော့ကျွန်းကျေးရွာတွင် ပျောက်ဆုံးခဲ့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား အသတ်ခံရလျက် ပြန်လည်တွေ့ရှိ
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျူးလွန်သူသုံးဦးအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဖမ်းဆီးရမိ
ဓာတ်ပုံ – နိုင်ရဲဝေ
သမီးရည်းစား စကားများရာမှ ကျောင်းသူတစ်ဦး လည်ပင်းညှစ် သတ်ခံရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဇွန် ၂၆ ရက်က အမပူရမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
အမရပူရမြို့နယ်၊ တောင်သမန်ကျေးရွာအုပ်စု ထန်းတောကျေးရွာ၊ ရွှေဘုံသာသာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းဝင်း အရှေ့၌ ဇွန် ၂၆ နံနက် ၁၂ နာရီခွဲခန့်က ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှ တတိယနှစ် ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူတို့ သမီးရည်းစားခြင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ သေဆုံးရခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“သမီးရည်းစား စကားများရာကနေ ကောင်လေးက ကောင်မလေးလည်ပင်း ညှစ်မိရာက လက်လွန်သွားပြီး ကောင်မလေး သေဆုံးသွားတာပါ။ သွေးစတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကုတ်ခြစ်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေပါ။ ကောင်လေးကို ခုဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ အမှုတော့ မဖွင့်ရသေးပါဘူး” ဟု အမရပူရ မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်မင်းပိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။
သေဆုံးခဲ့သည့် ကျောင်းသူမှာ မ —- (၁၉ နှစ်) ဒုတိယနှစ်၊ ဥပဒေ (ရတနာပုံတက္ကသိုလ်) တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ သပြေချောင်း ကျေးရွာနေသူဖြစ်ပြီး ဒုတိနှစ်ကျောင်းသူအား လည်ပင်းညှစ်သတ်သူမှာ မောင် —- (၂၀ နှစ်) တတိယနှစ် ပထဝီ (ရတနာပုံတက္ကသိုလ်) မိုးမိတ်ခရိုင်၊ မဘိန်းမြို့နယ် ဝိုင်းလုံကျေးရွာနေသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on သမီးရည်းစား စကားများရာမှ ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသူတစ်ဦး လည်ပင်းညှစ် သတ်ခံရမှု ဖြစ်ပွား
ဘားအံမြို့နယ် အိန္ဒုနယ်မြေရဲစခန်းမှ လူသတ်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘားအံမြို့မ ရဲစခန်းက မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုတို့ဖြင့်လည်းကောင်း အလိုရှိနေသည့် တရားပြေးတစ်ဦးအား ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးရာ ဇွန် ၂၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဇွန် ၂၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်က ဘားအံခရိုင်မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရဲအုပ်သက်စိုးဦး ဦးစီးအဖွဲ့နှင့် ဘားအံမြို့မရဲစခန်း နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင် ဒုရဲအုပ်အောင်မျိုးကျော် ဦးစီးပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် လူသတ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုတို့ဖြင့် အလိုရှိသည့် တရားခံပြေးတစ်ဦး ရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းအရ သက်သေအမှတ် (၅) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမိုးကျော်၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်သန်းတို့နှင့်အတူ ၀ိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ တရားခံပြေး ဝေဇင်ထွန်း (ခ) လူခွေး (ခ)ငပိန် (၂၂ နှစ်) အား ၎င်း၏နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည့် တရားခံပြေး ဝေဇင်ထွန်း (ခ) လူခွေး (ခ) ငပိန်(၂၂ နှစ်) မှာ အိန္ဒုနယ်မြေရဲစခန်းမှ (ပ)၂/၂၀၁၅၊ ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂/၃၂၆/၁၁၄/ကျင့် ၅၁၂ (လူ သတ်မှု၊ အပြင်းအထန်နာကျင်စေမှု၊ အားပေး ကူညီမှု) တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘားအံမြို့ မရဲစခန်းက မယ (ပ) ၁/၂၀၁၅၊ (မူးယစ်ဆေး ၀ါးသုံးစွဲမှု ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု) တို့ဖြင့် အလိုရှိနေသည့် တရားခံပြေးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရသဖြင့် တရားစွဲတင်ပို့နိုင်ရေး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged လူသတ်မှုLeaveaComment on လူသတ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုတို့ဖြင့် အလိုရှိသည့်တရားခံပြေးတစ်ဦး ဘားအံမြို့တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
Posted in InternationalTagged ကလေး, လူသတ်မှုLeaveaComment on ဂျပန်တွင် မွေးကင်းစ ကလေးအလောင်းကို ပစ္စည်းသိမ်းဗီရိုထဲ၌ စွန့်ပစ်ခဲ့သည့် မိခင်ကို ဖမ်းဆီး
Posted in CrimeTagged မိုးကုတ်, လူသတ်မှု, လေးလောင်းပြိုင်LeaveaComment on မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင် မိသားစုလေးဦး အသတ်ခံရ